Vaovao - Nanolotra 150 tapitrisa Sets fitaovana fanandramana ho an'ny COVID-19! Fa maninona ity orinasa ity no arahabain'ny orinasa IVD
Nanomboka ny taona 2020, ny indostria IVD manerantany dia nisy fiatraikany mahery vaika tamin'ny COVID-19. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fiheverana ny fitsapana asidra niokrika any amin'ny firenena maro, ny orinasa IVD dia tsy vitan'ny hoe namorona ny vokatra detection pathogen respiratory fa nampihatra an'io haitao io ihany koa ho an'ny fampandrosoana sy ny fampiharana ireo vokatra fitiliana pathogen hafa.
TIANGEN, orinasa mitarika eo amin'ny sehatry ny fanadiovana asidra nokleika ary mpamatsy akora hatraiza hatraiza hatraiza ao amin'ny sahan'ny IVD, dia nampiseho ny tenany tao amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka tany Shina (Shanghai), ny fisorohana ny areti-mifindra ary ny fampirantiana fitaovam-piarovana ary ny fampirantiana sy ny fanondranana ivelany (Shanghai Fair) 2021 miaraka amin'ny fonosana vahaolana momba ny detection virus. Tao amin'ny Fair, TIANGEN dia nampitombo ny fahatakarana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa orinasa IVD ao an-trano sy any ivelany ary mampiroborobo ny orinasa IVD hahatratra fampandrosoana haingana amin'ny vanim-potoana aorian'ny valan'aretina.
Nanomboka tamin'ny taona 2020, TIANGEN dia nanolotra fanandramana maherin'ny 20 tapitrisa ny reagents fitrandrahana asidra niokleary, fanandramana maherin'ny 150 tapitrisa ny akora ary ny mpitrandraka asidra nokleika an-jatony ho fisorohana, fanaraha-maso ary fitsapana ny COVID-19.
Ny akora fitrandrahana virus TIANGEN dia eken'ny orinasa IVD malaza any an-toerana sy any ivelany. Ao amin'ny WHO Emergency Use Assessment Coronavirus disease (COVID-19) IVDs PUBLIC REPORT navoaka tamin'ny Jona 2020, ny kitapo fitrandrahana asidra nokinika TIANGEN dia voatanisa ho toy ny vokatra atolotra ho an'ny fitrandrahana asidra niokrika ao amin'ny COVID-19. Ao amin'ny lisitry ny Reagents momba ny detection hita ao amin'ny COVID-19 navoakan'ny The Global Fund tamin'ny Janoary 2021, ny vokatra TIANGEN dia voatanisa ho akora amin'ny orinasa maro ao an-trano sy any ivelany.
TIANGEN, manana ny mari-pahaizana tonga lafatra amin'ny fanondranana sy ny fizotran'ny asa, dia nanitatra ny fandraharahana iraisam-pirenena ho an'ny firenena sy faritra maherin'ny 40, ao anatin'izany i Japan, Singapore, France, Argentina, Kenya, sns. Amin'ny fampandrosoana ny asa any ivelany, dia miasa mafy i TIANGEN miaraka amin'ny firenena orinasa hiara-mandroso amin'ny fanatontosana iraisam-pirenena miaraka ary mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny fivelarana ara-pahasalamana ho an'ny olombelona rehetra.
TIANGEN dia manana traikefa mihoatra ny folo taona amin'ny fanompoana IVD orinasa miaraka amina fomba fiaraha-miasa tokana mety ho an'ny mpanjifa orinasa. Ekipa serivisy matihanina no hatsangana amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo mpitarika ny R&D, ny haitao ary ny tetikasa handrafetana sy hanomezana teti-piaraha-miasa namboarina arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Ity modely ity dia natao hanampiana ny mpanjifa hamaha ny olana sedrain'ny R&D sy ny famokarana ary hanome vahaolana ho an'ny mpanjifa mety kokoa amin'ny fampandrosoana ho avy.
Tao amin'ny China (Shanghai) International Technology Fair tamin'ity taona ity, TIANGEN dia nanolotra tsy ny fitrandrahana asidra nukôtika mandeha ho azy be loatra sy ny toeram-piasan'ny pipetting auto auto fa ny vokatra azo avy amin'ny reagent sy ny akora ho an'ny fitsapana SARS-COV2, izay nahasarika ireo orinasa IVD anatiny sy ivelany amin'ny Fair mba hifandraisana.
Nanome fitaovana manta avo lenta sy vahaolana namboarina ho an'ny mpanamboatra reagent diagnostika molekiola, andrim-pikarohana ara-pitsaboana, CDC ary vondrona fampiharana hafa i TIANGEN ary manome vahaolana fikarohana biolojika samihafa ho an'ny oniversite, andrim-pikarohana ary andrim-pikarohana siantifika hafa.
Amin'ny vanim-potoana aorian'ny valan'aretina dia hanome vahaolana vaovao bebe kokoa amin'ny orinasa IVD i TIANGEN ho an'ny andrana asidra nukôniôma pathogen sy ny fomba fitiliana molekiola hafa ary hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra hanatsara ny fifaninanana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary hiarahabana ny fanamby ho avy. .
Fotoana fandefasana: Mar-21-2021